lundi, 09 janvier 2017 11:23
FJKM Ambatomena : 160 taona
Nankalaza ny faha 160 taonany ny Fiangonan’i Jesoa Kristy Eto Madagasikara Ambatomena, izay synaoda Antananarivo andrefana.
Raha tsiahivina moa dia tamin’ny 1857 no niorina ity Fiangonana ity, nanokatra ny lanonana omaly alahady, tamin’ny alalan’ny mpitandrina RAZAFIMAHATRATRA Jean William, ary nanamarika izany ihany koa moa ny fanaovana ny T-shirt misy ny famantarana ny faha 160 taona.
Amin’ny 13 sy 14 janoary ho avy izao moa ny famaranana izany fankalazana izany.
lundi, 09 janvier 2017 10:23
Andapa : Mini-bus nanao taingim-be nivarina anaty hantsana, maty tsy tra-drano ny mpamily
Omaly alahady 8 janoary 2017, tokony ho tamin’ny 2ora tolakandro io no maty tampoka teny ampiakarana an’i Masiaposa, 8km tsy hidirana ny an’Andapa ny fiara mini-bus Mazda iray nitondra tanora eo amin’ny 21. Vao maty ny motera dia nihemotra ka latsaka tany anaty tevana ilay fiara.
Nipitika ny ankamaroan’ireo mpandeha fa ny mpamily, izay tanora erotrerony atao hoe : Dolin avy ao Ampampamena, Kaominina Ambodivoara Sambava no maty tsy tra-drano. Nisy mpandeha hafa iray tapa-tanana. Tsy nisy nampanahy ny ankoatra izay.
lundi, 09 janvier 2017 10:22
Air Madagascar reprendra ses vols Antananarivo – Guangzhou – Bangkok à partir du 12 février 2017.